UFangoria uzisa umdlalo weqonga 'emva kokuzalwa' ebomini - iHorror
Ikhaya Iindaba ezothusayo zoLonwabo UFangoria uzisa umdlalo weqonga 'emva kokuzalwa' ebomini
UFangoria uzisa umdlalo weqonga 'emva kokuzalwa' ebomini
by USam Angelo Septemba 12, 2018
ibhalwe ngu USam Angelo Septemba 12, 2018
Ukuba ngumzali kunzima kakhulu, ngakumbi xa kusenziwa inguqulelo enkulu yesilo sana sikaFrankenstein. Andikwazi ukucinga ngokuzama ukudibanisa usana lwakho ekuqaleni (ngaphandle kokukhulelwa) kungumsebenzi olula okanye ococekileyo. Yiyo loo nto ifilimu entsha kaFangoria Emva kokuzalwa iya kuba yifilimu ekufanele ukuba ibonelwe abazali abanokuba bazenzele umntwana wabo uFranken, kodwa bafuna iingcebiso kunye namacebo okuyigcina iphila.
Umdlalo weqonga, ekuqaleni kukaLaura Moss (Usuku lwefry kwaye Ukuphakama: Ibali leManyano yamaZombi) kunye noBrendan O'Brien (Abamelwane kwaye Abamelwane 2: Ukunyuka kweSorority), Emva kokuzalwa Iya kuhanjiswa nguMoss, ixhaswa ngezimali yiFangoria, iingxelo Umhla wokugqibela. Kunye noMoss, Mali Elfman (Ngaphambi kokuba ndiVukeisetiwe ukuvelisa ukongeza kwiDallas Sonnier (Amathambo eTomahawk kwaye Ukurhuqwa kwiKhonkrithikunye noAmanda Presmyk (Umphathi woonopopi: Little Reich kwaye Ukurhuqwa kwiKhonkrithiyeFangoria kunye neCinestate. UFangoria uya kuba nenxaxheba yabavelisi abaphezulu ababelwe uPhil Nobile Jr. (Iprofayile yokubulala kwaye IHalloween: Ibali langaphakathikunye neClay Neigher (Uloyiko lukaSathana (pre-imveliso)). Iqela elibonelelweyo liza kujongana nale ntombazana iyichukumisayo kunye nomzali osemgangathweni.
Ifoto kaDallas Sonnier ngu-Ian Caldwell
Iinkcukacha nge Umhla wokugqibelaInqaku, Emva kokuzalwa malunga negcisa lokugcina izidumbu elinakho ukuqinisa isidumbu sosana oluyintombazana; Nangona kunjalo, ngelixa usana oluncinci lusaphila okwangoku, alunakuphila ngeendlela zendalo njengalo naluphi na usana olusandul 'ukuzalwa. Ukugcina intombazana encinci iphila, igcisa eliguqukileyo lisisazinzulu kufuneka liqokelele izinto eziyimfuneko zebhayoloji ukuze zinike iFrankenbaby. Ngenxa yoko, iinxalenye ze-bio ezifunekayo ukugcina intombazana iphila kufuneka zivela kubafazi abakhulelweyo.
Ifoto ngu-David Bukach Photography
Ngelishwa ku-Frankenstein wethu omtsha, umama wentombazana ufumanisa ukuba umntwana ubuyiselwe ebomini ngeendlela ezingekho mthethweni. Ngombulelo kubuchwephesha beMorgue, bobabini bayakwazi ukukhokelela kwisivumelwano esiqinisekisa ukuba bazakuqala uhambo olubi ebusuku ekungekho kubuya mva kulo.
Emva kokuzalwa Ithembisa ukuba sisihogo esinye sohambo olunomdla, into entsha ethatha ibali elidala laseFrankenstein eliphinde lavuselelwa. UFangoria ukwabhengeze ukuba bazokuxhasa uthotho lweepisodic zoyikisayo ezibandakanya uBarbara Crampton, onokuthi ufunde inqaku lethu eligubungela oko Apha!
Emva kokuzalwaiintsanaiintsana ezifileyoUFangoriaFrankensteinULaura Moss
Ukubhala ngobuchwephesha ukusuka eOhio. Ndingene: iimuvi, umdlalo, ukufunda (ngakumbi ii-comics kunye ne-manga), iyacaphukisa intombi, kunye nokubhala. Ezinye izinto ezothusayo / ezithandekayo zibandakanya: UkuKhanya, oGqibeleleyo uBlue, Ummeli weParanoia, Abafokazi (abantu), Intombi kaBlackcoat, kunye neTexas Chainsaw Massacre (1974)
UDerek utyholwa ngokuDlala iNdima yokuDala kwindibano ezayo ye 'Swamp Thing'
Uphengululo lwe-TIFF: UJeremy Saulnier 'Bamba uMnyama' yiBleak entle